२०३८ सालको कुरा हो । म त्यति बेला ४ कक्षामा पढ्थेँ । पढाइमा ठिकै थिएँ । पढाई सँगसँगै म अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागि भइरहेकी हुन्थेँ ।
मेरो सौभाग्य, मैले उहाँ आएको दिन आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ । राजारानीको सवारी हुँदा ठाउँठाउँमा स्थानीय कलाकारहरुले प्रस्तुति दिने चलन थियो । मेरो स्कुलबाट म छानिए ।
राजारानी ठूलो मञ्चमा अगाडि बस्नुभएको थियो । कलाकारहरुलाई आआफ्नो प्रस्तुति देखाउन थाले । मेरो पालो आयो । घिन्ताङ घिन्ताङ मादल ठोक्दै मैले गीत गाएँ–
मलाई पहिले नै थाहा थियो– राजारानीसँग कुरा गर्दा अलिक पछाडि उभिनु पर्छ । म रानी ऐश्वर्या सरकारको पछाडि उभिए । उहाँले मतिर टाउको फर्काएर सोध्नुभयो– नानी कति कक्षामा पढ्छौ ? म चार कक्षामा पढ्थेँ, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु सरकार भनेँ । अनि उहाँले भन्नुभयो– म पैसा पठाइदिन्छु, राम्रोसँग पढ । मैले स्वीकृतिमा मुन्टो हल्लाए ।
दाङ आएको केही दिनमा मलाई फेरि अन्चलाधीशले बोलाउनुभयो । मलाई लिएर हाम्रो स्कुलको प्रधानाध्यापक सर जानुभएको थियो । त्यहाँ दरबारबाट मेरो नाममा स्कलरसिप आएको रहेछ । अन्चलाधीशले सोध्नुभयो– नानी सानी छिन्, सधैं पैसा लिन आउन सजिलो हुँदो रहेनछ, स्कुलमा पठाइदिउँ वा उनलाई बैंकमा खाता खोल्न भनिदिनु । मैले यही कुरा घरमा भनेँ । बुवा र आमाको नागरिकता लिएर हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गयौँ, खाता खोल्यौँ । त्यसपछि मेरो खातामा प्रत्येक महिना १ सय ५० रुपैयाँ आउन थाल्यो । त्यो नै दरबारले मलाई दिएको स्कलरसिप थियो ।
त्यसको तीन वर्षपछि म नौ कक्षा पढ्दै गर्दा फेरि दरबारबाट हामीलाई निम्तो आयो । राजाको जन्मोत्सवका लागि त्यो निम्तो आएको थियो । म, बुवा र आमा भएर दाङबाट काठमाडौं आयौँ । २०४३ सालको वीरेन्द्र राजाको त्यो जन्मोत्सवको रात्रिभोजमा सहभागि हुन आउँदा हामी खिचापोखरीमा बसेका थियौँ । १४ पुषको साँझमा हामी दरबार गयौँ । त्यति बेला मैले साडी लगाएकी थिएँ । खासमा दरबारमा जाँदा सधैं साडी लगाउनु पथ्र्यो । दरबारमा बुवा र आमालाई भित्र जान दिइएन । ममात्र गएँ । यसपटक पनि पहिलेजस्तै मैले खुबै प्राक्टिस गरेर गएकी थिएँ ।
रात्रीभोज चलिरहेको थियो । राजा घुम्दै म भएको ठाउँ नजिकै आउनुभयो । मैले एकस्वरमा भनेँ– मौसुफ सरकार, म हजुरहरुको स्कलरसिप पाएकी कोमल वली । मैले साफ गेम खेलेँ, मैले राष्ट्रिय गेम खेलेँ, गीत गाएँ, फस्र्ट भएँ, यसो गरेँ, उसो गरेँ । मैले एकैस्वरमा यी सब कुरा सुनाउँदा वीरेन्द्र राजाले मलाई हेरिरहनुभएको थियो । जब म रोकिएँ, उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो । खुसी हुनुभयो, राजा खुसी हुनुभएको यो कुराले म पनि औधी खुसी भएँ । एसएलसीसम्मका लागि मैले दरबारबाट पाएको छात्रवृत्तिमा पढेँ । एसएलसीपछि त्यो बन्द भयो । त्यसको केही वर्षपछि म काठमाडौं आएँ । त्योबीचमा मैले विभिन्न खेलहरु खेलिसकेकी थिएँ, विदेश गइसकेकी थिएँ ।
मैले फेरि पनि नमस्कार गर्दै भनेँ– मौसुफ, हजुरहरूको छात्रवृत्ति पाएर पढेकी कोमल वली हुँ म । उहाँले भन्नुभयो, ‘वली, तिमीलाई थ्याङ्क यु है ।’ मैले भनेँ, ‘सरकार जो हुकुम भयो ।’
२०५४ सालको कुरा हो । म आफ्नो स्कुटीमा कान्तिपथको बाटो कतै जाँदै थिएँ । ट्राफिकमा मेरो स्कुटी रोकियो । अहिलेको निर्वाचन आयोगअगाडिको कुरा हो । मेरो छेवैमा एउटा गाडी आएर रोकियो । त्यो गाडीको पछाडि एउटा कुकुर थियो, मैले त्यतै ध्यान दिएँ । माथि छत नभएको त्यो गाडी कसले चलाएको छ भन्नेमा पहिले ख्याल दिइँन, कुकुरसँगै एकजना व्यक्ति पनि देखेपछि बल्ल मैले अगाडि देखेँ । कता कता चिनेको मान्छेले गाडी चलाएको जस्तो आभास भयो । म झसङ्ग त्यति बेला भएँ जब मलाई थाहा भयो, त्यो गाडी चलाउने व्यक्ति अरु कोही नभएर वीरेन्द्र राजा भएको मैले चाल पाएँ । हत्तपत्त मैले नमस्कार गरेँ । अनि भनेँ– सरकार, म कोमल वली । सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएर पढेँ सरकार । उहाँ हाँस्नुभयो ।
त्योबीचमा मेरा गीतहरू निकै चले । केही समयमा मैले राजाबाट गोरखा दक्षिण बाहु पनि पाएँ । त्यो कार्यक्रममा पनि मैले उभिएरै आफ्ना कामहरूबारे बताएँ । जहाँजहाँ र जहिलेजहिले मेरो उहाँसँग भेट हुन्थ्यो, मैले आफ्ना कुरा सुनाइहाल्थे, सबै कुरा भनिहाल्थे । अनि सुरुवात चाहिँ त्यही शब्दबाट गर्थेँ– सरकारबाट स्कलरसिप पाएकी कोमल वली म । एकपटक त्यस्तै भेटमा राजाले मलाई भन्नुभएको थियो– मैले तिम्रो गीतबारे थाहा पाएको छु वली, मैले सुनेको छु ।
मैले उहाँहरु अगाडि गाएको भने त्यही एकपटक मात्र हो– दाङमा, म चार कक्षामा पढ्दा । मलाई के छ कोमल भनेर राजकुमार दीपेन्द्रले सोध्दा मैले भनेकी थिएँ, ‘म सरकारको प्रतिभाबाट निकै प्रभावित छु सरकार ।’ स्पोर्टस् काउन्सिलका कार्यक्रममा मैले एमसी गर्न थालेपछि निकै पटक दीपेन्द्रसँग मेरो भेट भएको थियो । त्यसैले म उहाँसँग पनि खुलेर नै कुरा गर्थेँ । स्पोर्ट्स काउन्सिलमा हुने कार्यक्रममा युवराज दीपेन्द्रले पहिले नै सोध्नुहुन्थ्यो रे– कार्यक्रम कसले चलाउने हो ? कोमल वलीले कार्यक्रम चलाउने भन्ने जानकारी पाएपछि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो रे– ल, ठीकै छ, त्यसो भने राम्रो हुन्छ ।
कोटेश्वरको एउटा स्कुलको कार्यक्रममा युवराज अतिथि हुनुहुँदो रहेछ । तर, उहाँ त्यहाँ ढिला पुग्नुभएछ । त्यहाँका बालबालिकाहरूलाई स्कुलले उहाँको स्वागत गर्न २/३ घन्टा उभ्याएछ । यो कुरा मैले पनि थाहा पाएको थिएँ । त्यसको केही दिनमा मेरो युवराजसँग काभ्रेमा भेट भयो । त्यहाँ एउटा खानेपानी परियोजनाको उद्घाटन थियो । म त्यो कार्यक्रममा एमएसी गर्न गएकी थिएँ । कार्यक्रम सकियो ।
त्यो छात्रवृत्ति नपाएको भए म यो ठाउँमा आज हुने थिइनँ, सायद अध्ययन गर्ने पनि थिइनँ कि ? कस्तो हुन्थ्यो होला अहिलेको मेरो जीवन ? म यी कुराहरू सोच्न थालेँ । त्यो छात्रवृत्तिले गाउँमा मलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिदिएको थियो, मैले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको थियो । यी सारा कुरा सम्झिएपछि मेरो मन अमिलो भयो । एक महिनाका लागि जापानको कार्यक्रममा गएकी म तत्काल फर्किने निर्णय गरेँ । फर्किएँ । मन कताकता भरिएर आयो । म घ्वाँघ्वाँ रुन थालेँ ।
भोलिपल्ट विहान मैले कपाल खौरिए, किनकि मैले मेरो एउटा परिवार गुमाएकी थिएँ । देशले राजा गुमाएको थियो, सच्चा अभिभावक गुमाएको थियो । त्यो १९ जेठको रात म टुहुरी भएँ । फरकधार अर्काइभबाट
प्रकाशित मिति : जेठ १९, २०७९ बिहीबार ८:२:४९, अन्तिम अपडेट : जेठ १९, २०७९ बिहीबार ८:२३:३
इमेल: n[email protected]